Mareykanka Oo Ka Digay Weeraro Ay Al-Shabaab Ku Qaadaan Diyaaradaha Tega Kenya - Wararka Maanta
Home/Wararka Somali/Mareykanka oo ka digay weeraro ay Al-Shabaab ku qaadaan diyaaradaha tega Kenya
Mareykanka oo ka digay weeraro ay Al-Shabaab ku qaadaan diyaaradaha tega Kenya
Nairobi (WararkaMaanta) – Warbixin kasoo baxday maamulka duulista hawada ee federaalka Mareykanka ee loo yaqaano (FAA) ayaa shaacisay suurta-galnimada weeraro ay dagaalyahanada Al-Shabaab ku qaadi karaan diyaaradaha isticmaala hawada Kenya.
Qoraalkan ayaa lagu sheegay in FAA ay heshay xog ku aadan weeraradaas oo ay damacsan-tahay kooxda Al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka fulisa dalka Kenya.
Sidoo kale Mareykankan ayaa digniintan la wadaagay dowladda Kenya, si ay u saameyso feejignaan dheeri ah, ugana hortegto qorshaha Al-Shabaab.
Warbixintan ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in weeraradan ay qatar ku noqon karaa duullimaadyada rayidka Mareykanka & kuwa dibadda & gudaha ah ee dalka Kenya.
“Xadgudubka Xagjirnimada ee kasoo gudbaya Xadka Soomaaliya waxa ay halis ku tahay duullimaadyada rayidka Mareykanka & kuwa dibadda & gudaha ah, waana in la ilaaliyaa hawada Kenya” ayaa lagu yiri qoraalka maamulka duulista hawada ee federaalka Mareykanka.
FAA ayaa sidoo kale intaasi kusii daray in kooxda Al-Shabaab dhowr jeer ay ku hanjabtay in bartilmaameedkeedu yahay diyaaradaha caga-dhigta garoomada Kenya
Ugu dambeyn warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay awood u leedahay beegsashada diyaaradaha, islamarkaana ay heysato hubka culus, kuwa fudfudud oo ay qayb ka yihiin qoryaha lidka diyaaaradaha & sidoo kale kuwa Garbaha laga tuuro intaba.
Si kastaba Al-Shabaab ayaa hore weeraro khasaare xoog-leh geystay ka fulisay Kenya, waxaana ka mid ah meelaha ay bartilmaameedsatay saldhigga Mareykanka ee Manda Bay.
AlShabaab digay Diyaaradaha Kenya Mareykanka qaadaan tega wararka somalia maanta weeraro
Immisa duqeymood ayuu maamulkii Trump ka fuliyey Soomaaliya?
Xubno Shabaab ahaa oo howl-gal lagu laayey